Rant: ny teny "P" | Martech Zone
Alarobia, Jolay 2, 2014 Douglas Karr
Mahafinaritra ny miresaka momba ny mpivarotra lehibe Miverena amin'ny fampiasam-bola. Omaly, nanatrika fivoriana niaraka tamin'ny orinasa iray momba ny trano sy trano izay nanana olana vitsivitsy tamin'ny tetikadin'izy ireo aho. Ny tranokalan'ny brochure-dry zareo dia tsy nitondra firaka be loatra ary nandany vola be tamin'ny programa ivelany maro izy ireo mba hitarika ny làlan-kizorana. Ny olana hitanay dia ny fandoavan'izy ireo ny orinasa rehetra hifaninana amin'izy ireo amin'ny Internet.
Ny familiana mihemotra avy amin'ny tahan'ny fiovam-po sy ny fidiram-bolany isaky ny akaiky, dia nanampy tamin'ny fakana sary an-tsaina hoe inona no fiantraikan'ny tetikady marketing amin'ny Internet amin'ny ankapobeny mba hampihenana ny vidiny isaky ny mitarika, hampitombo ny isan'ny mpitarika ary hampihena ny fiankinan'izy ireo amin'ny antoko fahatelo. Tsy fizotran'ny alina io fa mila paika sy paikady maharitra hanaovana tetezamita. Toa fanamby izany matetika amin'ireo orinasa mpidoroka amin'ny loharanom-baovao avy amin'ny antoko fahatelo.
Tena faly tamin'ny fivoriana izy ireo ary tsy ho ela dia hanaraka ny dingana manaraka izahay. Raha niresaka tamin'ny mpiara-mianatra tamiko momba izany aho, na izany aza, tsy afaka ny tsy hieritreritra fa ireo resaka fampiasam-bola rehetra ireo, fiverenana amin'ny fampiasam-bola, fandaniana amin'ny marketing, fandaniana amin'ny dokambarotra… dia tetika tokana daholo no nipoiran'izany. Raha te hampivelatra teti-bola amin'ny marketing dia tsy maintsy mampitombo ny tombom-barotra amin'ny orinasa iray ianao.
Taty aoriana, namaky tamina resadresaka ifandraisana momba ny tsy firaharahian'ny orinasa ahy fotsiny aho tombony. Tsy manaiky mihitsy aho. Ny 99% amin'ireo orinasa niara-niasa taminay - nanomboka tamin'ny orinasam-panjakana lehibe ka hatramin'ny fanombohana kely indrindra - dia nandrefy tombom-barotra nefa zara raha nahitana ny fahombiazan'izy ireo. Raha ny marina, ny fahazoana ny mpanjifa, ny fitazonana ny mpanjifa, ny fanodinam-bolan'ny mpiasa, ny fahefana, ny fahatokisana ary ny fizarana tsena dia avo indrindra hatrany amin'ny radara rehefa niresaka momba ny fanampiana ireo orinasa izahay. Tena tsy mbola nisy orinasa nanatona ahy ary nilaza an'izany mila mampitombo ny tombom-barotra izahay - ahoana no hanampianao?
Izany dia nilaza fa mahasosotra fa ilay teny hoe "P" dia lasa iray izay bitsibitsika fa tsy nihiaka avy any amin'ny tendrombohitra mafy indrindra. Ny tombom-barotra dia tsy mitovy dika amin'ny fitiavam-bola. Ny tombom-barotra no ahafahan'ny orinasa manakarama, mamela ny orinasa hitombo, mamela ny orinasa hampiasa vola amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ary - amin'ny farany - ny tombom-barotra no haba amin'ny orinasa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, arakaraka ny maha avo ny tombom-barotra ho an'ny orinasa no mahatsara kokoa izany ho an'ny toekarentsika ankapobeny. Ny tombom-barotra ambony dia miteraka fidiram-bola avo kokoa hanohanana ireo olom-pirenena mahantra indrindra antsika. Ny tombom-barotra avo lenta dia ahafahan'ny orinasa toa ahy hitombo ary ahafahana mandroso sy miasa ho an'ireo izay mitady asa na mitady handroso.
Ny fitsiriritana dia ny fananan'ny orinasa harena be nefa lanin'ny mpiasa, ny mpanjifany ary ny fiaraha-monina misy azy ireo. Ireo orinasa mahasoa be fantatro dia mandoa tsara ny mpiasan'izy ireo, manohy manatsara ny traikefa ho an'ny mpanjifany, ary manambola ary manome be ho an'ny fiarahamonina. Ary manao izany amin'ny alàlan'ny fanangonana harena an-tsitrapo izy ireo fa tsy mandray izany.
Heveriko fa tsy tokony hangina momba ny marketing sy ny fiatraikany amin'ny tombom-barotra isika. Heveriko fa tokony hankalaza tombony isika… arakaraka ny maha lehibe azy no tsara kokoa. Ary tsy tokony hitady fomba hampihenana azy io isika amin'ny alàlan'ny hetra sy ny lalàna mifehy. Mifanohitra izany.
Ity ny fampitomboana ny tombom-barotrao sy ny tombom-barotra!
Tags: vidin'ny dokam-barotrafikambananafitiavam-bola tafahoatrafampiasam-bola-barotrafandaniana amin'ny marketingtombonyfiverenana amin'ny fampiasam-bola